Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:05 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:04 PM No comments:
” တရားအလှူက ဘာကြောင့် မြတ်သလဲ”
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:03 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:02 PM No comments:
ဘုရားတည်ခြင်း နှစ်မျိုးနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ။
ပေးခြင်းသည် လူတို့၏ နှလုံးသား၌ ဘုရားတည်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:01 PM No comments:
တရားထိုင်တဲ့ခါ ဣရိယာပုဒ် ကြာတာမကြာတာ ထက် အမှတ်သတိနဲ့ ဘယ်ဣရိယာပုဒ် မဆိုရှိနေရမယ့် အချက်ကလိုရင်းပါ။ ဣရိယာပုဒ်ကြာရှည်ပြီး တွေးချင်ရာတွေးနေမယ်ဆိုရင်သော်လည်းကောင်း၊ အိပ်ငိုက်နေရင်သော်လည်းကောင်း မထိရောက်ပါဘူး။ ဣရိယာပုဒ် ကြာရှည်အောင် တမင်သက်သက်လုပ်ယူ၇န် မလိုအပ်သလို၊ တရားက သမာဓိအားကောင်းလာရင် မဖြုတ်ချင်လောက်အောင် အလိုလိုဖြစ်ပြီး ဣရိယာပုဒ် ကြာကြာထိုင်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:00 PM No comments:
မနေ.ကစကားပြောကြတယ်၊စကားပြောတော. နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလဲမဟုတ်၊ တချို.များ သူဌေးကြီးတွေဟာလေ တစ်နေ.သုံးလိုက်တဲ. အသုံးစားရိတ်ဟာ ဒီမြန်မာနိုင်ငံက သူဌေးတွေတစ်သက်လုံးစားလောက် သုံးလောက်တယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ပစ္စည်းရှိတဲ. သူဌေးတွေနဲ. တစ်သက်လုံးစားလောက်တဲ.စည်းစိမ်ကို တစ်နေ.တည်း သုံးပစ်တာပဲ၊အဲဒါလောက်ပေါတယ်တဲ.။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:59 PM No comments:
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အရိယာ အရှင်မြတ်ကြီးများကဲ့သို့ 
မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားလျှင်လည်း ဈာန်အဘိညာဉ်နှင့်တကွ
အရဟတ္တဖိုလ်ပေါက် ဘာမဆိုရနိုင် ရောက်နိုင်သော
အခွင့်ကောင်းကြီးများကို အမှန်ပင် ရနေကြပါ၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:56 PM No comments:
ပင်းယခေတ်၌ ထိုအချိန်က စစ်ကိုင်းတောင်
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:55 PM No comments:
အခါတစ်ပါးတွင် နတ်သား (၅) ပါးသည် မြတ်စွာဘုရားထံချဉ်းကပ်ကာ
ဒါနသည် အလွန် ကောင်းမွန်သောကြောင့် ပြုသင့်သည်ဟု တပည့်တော်ထင်ပါတယ်လို့ ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရား သာဓု သာဓု သာဓု ဆိုပြီး မှန်ပါတယ် နတ်သားလို့ ဖြေပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:54 PM No comments:
ရှင်အရဟံ၏ ဘွဲ့ တော်ကား အရှင်ဓမ္မဒဿီ ဖြစ်၏။ သထုံပြည် အရှင်သီလ ဗုဒ္ဓိမည်သော
ရဟန္တာအရှင်မြတ်၏ တပည့်ဖြစ်၏။ငယ်စဉ်ကပင် စောင့်ရှောက်၍ ရှင်ရဟန်းပြုပေး၏။
ဗေဒင်လေးပုံနှင့်တကွ ပိဋကကျမ်းဂန် တတ်မြောက်၍ ရဟန္တာဖြစ်တော်မူသည်။
ကျော်စောထင်ရှားသဖြင့် သောက္ကတဲမြို့(ယိုးဒယားပြည်ရှိ နွတ်ပုရီမြို့ )က
ဒကာများပင့်၍ ကြွရောက် သီတင်းသုံးရ၏။ ၁၀ နှစ်ကျော် နေပြီးမှ သထုံသို့ကြွလာ၍
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:51 PM No comments:
ဘကြီးတော်လက်ထက် အင်းဝမြို့မိုးထိကျောင်း၌ စာပေပရိယတ္တိသင်ယူနေဆဲ
သီတင်းသုံးဖော် မိတ်ဆွေရဟန်း နှစ်ပါးရှိ၏။ တစ်ပါးက အရှင်သဒ္ဓမ္မာလင်္ကာရ၊
တစ်ပါးက အရှင်ဝိသုဒ္ဓါစာရ၊ ၀ိနည်းအရာ၌ ရိုသေလေးစား၍ တစ်ပါးကိုတစ်ပါး
အလွန်ချစ်ကျွမ်းဝင်ကြသည်။ စာပေပရိယတ္တိလည်း ကျွမ်းကျင်ကြ၏။
တစ်နေ့ သောအခါ အရှင်သုဒ္ဓမ္မာလင်္ကာရက အရှင်ဝိသုဒ္ဓါစာရအား -
“ငါ့ရှင် ၊ ငါတို့ သည် ရခဲသော လူ့ ဘ၀တွင် ရဟန်းဘ၀ကိုလည်း ရခဲ့ကြပြီ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:49 PM No comments:
ဇာတိဿရဥာဏ်ကို ရသည်ဆိုရာ၌ ဘ၀များကို အစဉ်လိုက် အဖြစ်စုံကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်နိုင်သူကား အရိယာများမှတစ်ပါး မရှိနိုင်ပေ။ လောကီအဘိဥာဏ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရှေ့ နောက်အမြင်ရမှုကိုပင် သာသနာတော်၌ အကျိုးထက် အပြစ်သာ များစေသည်ဟု ဆိုရ၏။ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ မသိမြင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နေမိန္ဓရတောင် သိမ်သမုတ်ခန်းသည် မျက်စိဖြင့် မမြင်ရသော အမျိုးမျိုးသော
နတ်စိမ်း၊ အမနုဿ၊ ပြိတ္တာ၊ နတ်များနှင့် ခက်ခက်ခဲခဲ တွေ့ ဆုံဟောကြား၍ သိမ်သမုတ်ရခြင်းဖြစ်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးက အံ့သြရသော ပွဲလည်းဖြစ်၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:47 PM No comments:
ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ သိက္ခာသုံးပါးကို ပွားများ အားထုတ်ရမှာပါ။
အထူးသဖြင့် သိက္ခာသုံးပါးကို ဖြည့်ကျင့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသစ်ပြန်တည်ဆောက်ရမှာပါ။
အသစ် တည်ဆောက်ဖို့ မိနစ် နှစ်ဆယ် စောထပါ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:46 PM No comments:
ဗုဒ္ဓရဲ့ စွယ်တော်မြတ်လေးဆူတို့သည် သုတ်မဟာဝါပါဋ္ဌိတော် ပရိနိဗ္ဗာနသုတ် အဆုံးမှာ -
“ဧကာ ဟိ ဒါဌာ တိဒိဝေဟိ ပူဇိတာ၊ ဧကာ ပန ဂန္ဓာရပုရေ မဟီယတိ။
ကလိင်္ဂရညော ဝိဇိတေ ပုနေကံ၊ ဧကံ ပန နာဂရာဇာ မဟေတိ” လို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း
၁။ တာဝတိံသာ စူဋ္ဌာမဏိ စေတီထဲ၌ တစ်ဆူ၊
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:45 PM No comments:
တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အဓိပ္ပါယ်ကစပြီး အကျိုးကျေးဇူးပါ အလေးအ
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:43 PM No comments:
သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ တိပိဋက-ဒီကဘာဏက၊ နိကာယုဇ္ဇောတက-အဂ္ဂဓမ္မာစရိယ ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝိရိယ (တောင်စွန်း)
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:40 PM No comments:
ကင်းငြိမ်းမယ်။ အဲဒီ ကိလေသာတွေ ငြိမ်းမှ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော ဆင်းရဲခပ်
သိမ်း ငြိမ်းမယ် စသည်ဖြင့် ဒီလိုလည်း တွေးခေါ်ယူဆပြီးတော့ ကိုယ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့ အကျင့်
ကို ကျင့်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒကာ။ ။ အမှန်လျှောက်ထားရရင် ဆရာတော်နဲ့ မတွေ့ခင်ကတော့ ငါဟာတော်တော် ဟုတ်နေပြီ၊ စူဠသောတာပန်အဆင့်လောက်တော့ ရောက်နေတာပဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင် ကြီးခဲ့တာ ခုတော့ကာ ဣတိပိ သောဘဂ၀ါ အတန်းအစား တောင် ကျေပွန်လုံလောက်အောင် မရောက်သေးမှန်း သိရပါတယ် ဆရာတော်။
အခုဆရာတော် မိန့်ကြားသင်ပြသွားတဲ့ သရဏဂုံ ရှင်းတမ်းတရားမှန်း အတိုင်းသာဆို ရင် မြန်မာပြည်မှာ သရဏဂုံတည် ဥပါသကာအစစ်ဟာ ဖျစ်ဖျစ် မြည်အောင်ရှာမှ- ရှားနေတော့ မှာပဲ ဆရာတော်၊
နတ်၊ ၀ိဇ္ဇာ၊ ဗေဒင်၊ ဓါတ်ရိုက်၊ ဓါတ်စီး၊ ဓါတ်ဆင်တွေနဲ့ဖက်တွဲပြီး စိပ်ပုတီးကြီး လည်ပင်းဆွဲကာ သရဏဂုံတောထဲ ၀င်ရောမွှေနှောက် ခံယူနေကြတာတွေသာ များတာ သိရပါတယ် ဆရာတော်။
ဆရာ။ ။ အင်း…. ရှားပါးဆို အတိုင်းမသိ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရတနာအစစ်အမှန် ကို ဘုန်းကံပါရမီကြီးမားတဲ့ ဘုန်းရှင် ကံရှင် ပညာရှင်များသာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ဆည်းကပ်မှီဝဲ သုံးဆောင်ခံစားနိုင်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားသခင်က -
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:37 PM No comments:
ဒကာ။ ။ ဥပါဒါန်တရားလေးပါးထဲမှာ သီလဗ္ဗတုပါဒါန်ဆိုတာနဲ့ စပ်ပြီးတော့ အထက်ဆရာကြီးတွေ ၀ိဇ္ဇာဓိုရ် ထွက်ရပ်ပေါက်ဆရာကြီးတွေ၊ နတ် သိကြား ဗြဟ္မာကြီးတွေကို ချမ်းသာအောင် စီမံဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေတဲ့သူတွေဟာ သီလဗ္ဗတုပါဒါန်ထဲမှါပါဝင်တဲ့ အယူအစွဲ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲလို့ ပြောဆိုငြင်းခုံနေကြတာ မှန်ပါသလား ဆရာတော်၊
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:36 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:34 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:30 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တို့ မလုပ်မနေရသော ယုံကြည်လေးစား ပွားများခံယူမှု ဆိုတာကတော့ ဘုရားဂုဏ် ၉ ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး၊ သံဃဂုဏ်တော် ၉ ပါးရဲ့ ပါဠိအနက်များကို အရကျက် နှုတ်တက်ဆောင်တယ်၊ ရွတ်ဖတ်တယ်၊ အဓိပ္ပါယ်ကိုသိအောင် ဆွေးနွေးမေးမြန်း တယ်၊ ဒကာကြီးတို့ရ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:28 PM No comments:
လောကမှာ အဆိုးရွားဆုံး၊ မယုတ်ညံ့ဆုံးစိတ်။
လောကမှာ အဆိုးဆုံး အယုတ်ညံ့ဆုံးလို့ ဘုန်းကြီးယူဆတဲ့ ဆင်းရဲစိတ် ကိလေသာစိတ်
ဟာ မနာလိုတဲ့စိတ် ဣဿာပဲ။ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ထက် ရုပ်ချောနေတာကို မနာလိုဘူး။ အလကား
သက်သက် သူ့ဟာသူ ရုပ်ချောတာ ကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်သလဲ။ အဲဒါ သွားပြီး မနှစ်မြို့တဲ့ မနာလိုတဲ့
စိတ် ဖြစ်တာ။ အဲ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ထက် ပညာတတ်နေတာ မနာလိုဘူး။ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ထက်
နာမည်ကြီးနေတာ မနာလိုဘူး။ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ထက် လူချစ်လူခင်ပေါတာ လူကြည်ညိုများတာ
မနာလိုဘူး။ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ထက် ကြီးပွားချမ်းသာနေတာ မနာလိုဘူး။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:27 PM No comments:
ဂေါတမ မြတ်စွားဘုရားရှင် ဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့ရသော ဘုရားရှင် ၂၄ ဆူတော်
(၁) ဒီပင်္ကရာ ဘုရားရှင်
(၂) ကောဏ္ဍည ဘုရားရှင်
(၃) မင်္ဂလ ဘုရားရှင်
(၄) သုမန ဘုရားရှင်
(၅) ရေ၀တ ဘုရားရှင်
(၆) သောဘိတ ဘုရားရှင်
(၇) အနောမဒဿီ ဘုရားရှင်
(၈) ပဒုမ ဘုရားရှင်
(၉) နာရဒ ဘုရားရှင်
(၁၀) ပဒုမုတ္တရ ဘုရားရှင်
(၁၁) သုမေဓာဘုရားရှင်
(၁၂) သုဇာတာ ဘုရားရှင်
(၁၃) ပီယဒဿီ ဘုရားရှင်
(၁၄) ဓမ္မဒဿီ ဘုရားရှင်
(၁၅) အတ္ထဒဿီ ဘုရားရှင်
(၁၆) သိဒ္ဓတ္ထ ဘုရားရှင်
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:25 PM No comments: